चीन र भारतबीचको तनावबारे के भन्छ अमेरिका ? | Ratopati
चीन र भारतबीचको तनावबारे के भन्छ अमेरिका ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeभदौ १८, २०७७ chat_bubble_outline0
चीन र भारतबीच सीमा विवादको विषयमा पैदा भएको ताजा स्थितीमाथि अमेरिकाले पनि निगरानी गरिरहेको छ ।
अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले चीनको अन्यायपूर्ण नीतिका कारण भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देश अमेरिकासँग लामबद्ध भइरहेको बताएका छन् ।
‘चीनले गरिरहेको छ दादागिरी’
पोम्पियोले चीनको कम्युनिष्ट पार्टी (चिनियाँ सरकार) स्पष्ट रुपमा ताइवानदेखि हिमालयसम्म आफ्ना छिमेकीसँग दादागिरीको बाटोमा हिँडिरहेको बताए ।
उनले यहि दादागिरी साउथ चाइना सीमा पनि देखिएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘भारत–चीन सीमामा बनेको स्थितीको शान्तिपूर्ण हलको आशा छ । ताइवानको खाडीदेखि हिमालय र योबाहेक पनि चिनियाँ सरकार स्पष्ट रुपमा आफ्ना छिमेकीबीच दादागिरी देखाउन थालेको छ ।’